Shiinaha SICOMA Waxsoosaarka Mashiinka Muhiimka ah iyo Warshad | Jusheng
Mashiinka la taaban karo ee Sicoma
Mashiinka la taaban karo ee Sicoma 2m3
Sicoma Mao Mashiinka Muhiimka ah
Sicoma Twin Shaft Mashiinka La taaban karo
SICOMA waxay soo saartaa taxane isku dhafan oo moodooyin badan. Marka loo eego baahida macaamiisha, shirkadeena waxay doorataa inta badan heerarka caadiga ah ee MAO / MSO / MEO / MPC / AMP. Mashiinka inta badan wuxuu ka kooban yahay toddobo qaybood oo nidaam ah: Isku qasida taangiga / Nidaamka isku qasida / sanduuqa isku xidhka / Nidaamka la socodka iyo qalabka digniinta / Nidaaminta sifaynta (ma ahan taxanaha MPC / AMP) / Nidaamka Soo Saarida / Nidaamka Gudbinta
MAO Heerka Taxanaha Twin Shaft Mashiinka Muhiimka ah
Shatt wuxuu dhammeeyaa ilaalinta cirifka badan iyo ka hortagga hawada ee hawada si looga hortago qulqulka.
Nidaamka kormeerka qasniinta Uniquo si loo kormeero shilalka shaqada ee goarbox, sii daayo bamka albaabka. iyo bamka elektaroonigga ah ee saliidda lagu shubo.
Iyada oo nidaamka bamka dufanka DC 24V gaar ah isku darka la taaban karo tor, iibiya. barnaamijka saacadaha shaqeeya. caddeyn. boor-caddeyn, si fiican u wada shaqeynco.
Nidaamka lagu buufiyo biyaha tuubbada badan si loo hubiyo in foornada loo qaybiyo.
Naqshad culus, hawlgallo stablo ah
Qalabka gear-ka ee la xoojiyay oo lagu farsameeyay agab milatari iyadoo tiknoolajiyad sax ah la adeegsaday. awood furnaan badan iyo servico lile dheer.
Awoodda rangod lrom 15 cu. m ilaa 6.0cu m.
Nidaamka isku-darka ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, nidaamka dufan-la'aanta iyo biyo-gelinta shaatiga dhammaadka shaashadda, nidaamka kaamirada nidaamka cadaadiska sare, nidaamka miisaanka iyo nidaamka la socodka qoyaanka microw ave.
Awood buuxinta qallalan (L) 3000 4500 6000
Wax soo saarka is dulfuulan (L) 2000 3000 4000
Xawaaraha isku qasida(r / m) 24.5 24.5 24.5
Wareegga qasitaanka(s) 30 30 30
Isku-darka garbaha (prece) 14 16 20
Isku qasida matoorka & awooda (kw) 2x37 2x55 2x75
Miisaanka oo madhan (KG) 7500 9200 11800
MSO Mini Series Mashiinka Mashiinka Mashiinka qasabka ah ee qasabka ah
Ku qalabeysan yihiin shaabadooyin badan oo usheeda dhexe ah
Ku qalabaysan Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Daahinta Waraabinta Dusha Sare Si Loo Hubiyo Isku-Dhaafka Degdegga Ah
Mashiinka Nadiifinta otomaatiga ah DC24v
Awoodda Laga Bilaabo0.5cu.m Ilaa 1.5cu.m
Awood buuxinta qallalan (L) 750 1500 2250
Wax soo saarka is dulfuulan (L) 500 1000 1500
Xawaaraha isku qasida(r / m) 29 27 27
Isku darka garbaha (kumbiyuutarada) 14 12 14
Isku qasida matoorka & awooda (kw) 2x11 2x22 2X30
Miisaanka oo madhan (KG) 3600 5000 5600
MEO Compact Taxanaha Twin usheeda dhexe qasab la taaban karo
Ku qalabaysan shaabado usheeda dhexe,
Ku qalabaysan mashiinka saliidda lagu nadiifiyo ee gacanta lagu sameeyo.
Mashiinka saliida lagu shito ee ikhtiyaariga ahDC24V.
Cadaadiska sare ee culeyska, buuqa yar, hawlgalka xasilloonida. Dayactirka fudud, qalabka dayactirka ee qiimaha macquulka ah, sareynta udhaxeysa waxqabadka iyo qiimaha.
Awooddu waxay u dhexeysay 2.0 cu.m.
Ku habboon dhirta dhirta, adkeynta dhoobada duurka iyo mashaariicda isku dhafka jawiga-dabiiciga ah.
Awood buuxinta qallalan (L) 1250 1500
Wax soo saarka is dulfuulan (L) 750 1000
Xawaaraha isku qasida （r / m） 27 27
Wareegga isku darka （s） 30 30
Isku darka garbaha (kumbiyuutarada) 10 10
Isku qasida matoorka & awooda (kw) 2x18.5 2x22
Miisaanka oo madhan (KG) 4300 4500
Mashiinka Mashiinka 'MPC'
Qaabka isku-darka Planetary wuxuu ku habboon yahay isku-darka la taaban karo oo saafi ah, taas oo ka dhigi karta isku-darka maaddooyinka mid isku mid ah;
Waa xulasho ku habboon warshadaha qaybaha iyo precast;
Albaabka dheecaanku waa la furi karaa waana la xiri karaa iyadoo la adeegsanayo habka hydraulic / manual dual, oo loo isticmaali karo joogsiyo badan;
Dekedda dheecaanku waxay dooran kartaa saddex jiho oo kale, waxayna furi kartaa in ka badan laba isla waqti isku mid ah;
Dhaqaale iyo waara, si fudud loo ilaaliyo;
Marka la barbardhigo mashiinka mashiinka mataanaha ah ee isku mugga ah, dhererku wuu hooseeyaa, iyo qorshaynta qaabeynta ee saldhigga isku dhafku waa sahlan yahay;
Qalabka qaadista wadarta ee ikhtiyaariga ah;
Shirkaddu waxay leedahay sahay muddo-dheer ah oo qaybo xiranaya;
Waxaa lagu heli karaa 0.25m3 ~ 3.0m3 iyo qeexitaano kale.
Xawaaraha Planetary (r / m)
Xawaaraha caaro (r / m)
Number of cudud isku darka dheer (pc)
Tirada gacanta isku darka gaagaaban (pc)
Tirada cududda isku dhafan (pc)
Nadiifinta Hawada Nadiifinta Badan ee Dhammaadka Shaqada
Dayactirka Mashiinka la taaban karo
Hubso nadaafadda mashiinka iyo deegaanka ku hareeraysan.
Ka nadiifi walxaha ku soo ururay hawo-dhaqameedka wakhtiga si dareenka uu caadi ugu noqdo eber.
Hubi in saliida saliidda ee goob kasta oo saliidayn ah ay ku filan tahay, iyo saliidaynta nidaamka hawada waa inay haysaa saliid ku filan.
Hubi in matoorrada iyo qalabka korontadu kululaadaan, buuqa aan caadiga ahayn, haddii tilmaamuhu caadi yahay, iyo in calaamadduhu hagaagsan yihiin.
Hubi oo hagaaji mashiinka, balanbaalis balanbaalis iyo solenoid waalka badanaa si aad uga dhigto furitaanka iyo xidhitaanku inay buuxiyaan shuruudaha.
Si joogto ah u hubi dhammaan nidaamyada, oo wax ka qabashada wakhtiga haddii ay jiraan daadad boodh ah, dheecaan gaas ah, dheecaan saliid iyo dillaac koronto.
Mashiinka wax lagu kariyo iyo dheecaanka waa in la nadiifiyaa afartii saacadoodba mar si looga hortago in shubka haraaga ahi u adkeeyo ugana hor istaago hawlgalka caadiga ah.
Wareeg kasta waa inuu sii daayaa biyaha gudaha ee kombaresarada hawada, haanta keydinta hawada iyo shaandhada, isla markaana la baabi'iyo cilladaha dhaca inta lagu jiro howlgalka.
Waalka balanbaalista, qasiyaha, solaneid, shaandhada hawada iyo aaladda ceeryaanta saliida ayaa loo hayaa iyadoo la raacayo tilmaamaha ku habboon.
Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta, Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo,